နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Padaethar
အပြာ လောကမှ မင်းသမီးလေးတစ်ဦး ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ဇာတ်လမ်း
April 11, 2021 by Padaethar
ဂျပန်နိုင်ငံက အပြာကားလောကမှ မင်းသမီးလေးတစ်ဦး အကြောင်းဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းလေးကလည်း ရင်နင့်ဖွယ်ရာပါ။ သူ့နာမည်ကတော့ Anna Tsukishima လို့ခေါ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက AV Industry မှာတော့ လင်းလက်လာမယ့် ကြယ်ပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ရုရှား၊ အမေရိကန်နဲ့ ဂျပန်သွေးတွေ ရောယှက်ထားတဲ့သူမဟာ ထူးခြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မြင်တွေ့ဖူးတဲ့ အပြာမင်းသမီးတွေထဲမှာ ချစ်ဖို့အကောင်းဆုံး အချေဆုံးမိန်းကလေးအဖြစ် သူမကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ သူ့မှာပရိသတ်တွေ တစ်စထက်တစ်စ များများလာနေပြီး လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာဆိုလည်း သူ့အကြောင်း စိတ်ဝင်တစား ရှာဖွေကြည့်ကြတဲ့သူတွေ များစွာရှိလာပါတော့တယ်။ ဒါကလည်း နောက်ဆက်တွဲမှာ သင်တို့သိရှိရမယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းတစ်ခုရဲ့ လမ်းစလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထင်ရှားလာပြီးနောက်မှာ လူတွေဟာ သူမအကြောင်းကို ပိုပိုပြီးသိရှိနိုင်ဖို့ စုံစမ်းလာကြတဲ့အခါ ဆက်လက်ဖော်ပြမယ့် ရင်နင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုဟာလည်း ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ပုရိသတို့ရဲ့ … Read more
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်များ၏ တည်ဆောက်ပုံကို စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိစေရန် ဝတ်စုံဖန်တီးပြီး ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သည့်ဆရာမ
March 25, 2021 by Padaethar
ကလေးသူငယ်များအတွက် အသိပညာနှင့် အတတ်ပညာတို့သည် အလွန်အရေးပါလှပြီး လူငယ်တို့၏ ဘဝအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပေသည်။ ကလေးငယ်တို့သည် စာပေသင်ကြားရာတွင် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲ ဆော့ကစားရန်သာ တွေးတောနေတတ်ကြသည်။ကလေးငယ်တို့သည် ဘဝအကြောင်းကို မသိရှိသေးသည့်အတွက် မည်သည့်အရာကို ဂရုစိုက်သင်ကြားရမည်ကို မသိရှိကြသေးပေ။ ထို့ကြောင့် ကလေးငယ်တို့ကို ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် အသိပညာများတိုပွားလာစေရန်အတွက် ဆရာမတစ်ဦးသည် ဝတ်စုံတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ဆရာမသည် လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံအကြောင်းကို အမှန်တကယ်သိနားလည်စေရန်အတွက် လူ၏ အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ပုံဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ကာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ဆရာမဖြစ်သူ၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုသည် အမှန်တကယ် ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပြီး ကလေးတို့သည် စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် သေချာလေ့လာကြပြီး ဆရာမအတွက်လည်း သင်ကြားပြသပေးရန် အမှန်တကယ် လွယ်ကူခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ Shoon (Cele Daily) Unicode တပညျ့ဖွဈသူမြားကို ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျမြား၏ တညျဆောကျပုံကို အမှနျတကယျနားလညျစှာဖွငျ့ စိတျပါဝငျစားမှုရှိစရေနျ ဝတျစုံဖနျတီးပွီး ပညာသငျကွားပေးခဲ့သညျ့ဆရာမ ကလေးသူငယျမြားအတှကျ … Read more
အကဉျြးကခြံနတေဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးရာဇာ တပျမတျော စဈကောငျစီရဲ့ လှတျငွိမျး ခမျြးသာ ခှငျ့ဖွငျ့ လှတျမွောကျလာ
အကျဉ်းကျခံနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ တပ်မတော် စစ်ကောင်စီရဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာ အိမ်အကူ မိန်းကလေး ကိုနှိပ်စက်တယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ တရားရင်ဆိုင်အကျဉ်းကျခံ ​နေရသော သရုပ်ဆောင် (မင်းရာဇာ) တပ်မတော်စစ်ကောင်စီရဲ့ အကျဉ်းသား လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ဖြင့် ယနေ့ လွတ်မြောက်လာကြောင်း မိသားစုဝင် များကပြော ပါတယ်။ ထောင်ဒဏ် မချမှတ် ​သေးပေမယ့် လူငယ် သဘာဝ ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေ တဲ့ အ တွက် အပြစ် မရှိဟု ယူဆ ရတာကြောင့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့်ဖြင့် လွှတ်ပေး ခဲ့ကြောင်းသိရပါ တယ်။ မအလ..ယုတ်မာလွန်းပြီကွာ Credit Unicode အကဉျြးကခြံနတေဲ့ သရုပျဆောငျ … Read more
Categories နိုင်ငံတကာသတင်း, အနုပညာသတင်း
ညအချိန်မတော် ခြင်ထောင်လှန်စစ်မယ့် ဧည့်စာရင်း ဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်ပါပြီဗျာ ဧည့်စာရင်းများ ပြန်လည် တိုင်ကြားရန်နှင့် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းမရှိက ဒဏ်ငွေ ကျပ်တစ်သောင်း (သို့) ထောင်ဒဏ် ၇ ရက် ချမှတ်မည့် ဥပဒေပြဌာန်း လိုက်ကြောင်း အမိန့်ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက် ပါ တယ်။ ပုဒ်မ (၁၇) ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စု အတွင်း နေထိုင်သူသည် အောက်ပါ ကိစ္စ တရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက် လာ ပါ က သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက မှတ်တမ်းထား ရှိနိုင် ရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ တိုင်ကြားရမည်..(က) အခြားရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု တခုခုတွင် နေထိုင်ပြီး မိမိ အိမ်ထောင်စုစာရင်းဝင် … Read more
သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့နဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ဖဖေျောဝါရီလ ၁၇ ရကျအထိ ခြုပျရမနျယူထား
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်အထိ ချုပ်ရမန်ယူထား သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ ယူထားတဲ့ ချုပ်ရက် ရမန် ဟာဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်အထိ ဖြစ်တယ်လို့ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ အွန်လိုင်းပျံနှံခဲ့တဲ့ ရမန်လျှောက်ထားတဲ့ စာရွက်အရ ဒီနေ့ ပြည့်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် အမှုကို ထုချေဖို့အတွက် ရှေ့နေပါဝါ တင်ဖို့ ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးကို တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်တို့က လာခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ခရိုင်တရားသူကြီးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ရမန်ပြည့်တဲ့ ရက်ဟာ ဒီနေ့မဟုတ်ဘဲ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်အထိ ယူထားတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရမန်ပြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ကြားနာ တာကို ဗီဒီယို ကွန့်ဖရန့်နဲ့သာပြုလုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမ္မတနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ … Read more
ဖူးစာ ကံဆိုတာ……ဒီလို ဆန်းကြယ် စွာဆုံကြတယ်
January 26, 2021 by Padaethar
Nick Wheeler ဆိုတဲ့ လူတစ်ဦးဟာ ခြောက်နှစ်သားတုန်းက ကမ်းခြေ တစ်ခုမှာ သဲတွေနဲ့ဆော့ရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကောင်မလေးကို ရှိတယ်လို့တောင် သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာတဲ့အခါမှာ Nick Wheeler ဟာ သူနဲ့စေ့စပ်ထားတဲ့ ရည်းစားကောင်မလေးကို ငယ်ငယ်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ …. ဓာတ်ပုံတွေပြရင်း ဒီဓာတ်ပုံဆီ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ သူ့ကောင်မလေး အံ့သြတကြီးအော်လိုက်တာက “ အဲ့ဒါ ငါဟ ”…… ၁၉၉၄ ခုနှစ်တုန်းက ဒီဓာတ်ပုံကို ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိုင်ပေါင်းရာချီဝေးတဲ့အရပ်မှာ သူတို့က နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Wheeler ဟာ အဲ့အချိန်တုန်းက မိသားစုလိုက် ကမ်းခြေကို အပန်းဖြေထွက်လာကြတာဖြစ်ပြီး မိသားစုချင်း မရင်းနှီးတဲ့အပြင် ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိတယ်လို့တောင် မသိခဲ့ကြပါဘူး။ သူတို့စုံတွဲဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က စေ့စပ်ခဲ့ပြီး … Read more
January 21, 2021 by Padaethar
လူ ဆိုတာ မုန့် ကိုတော့ ဝေစားမယ်၊ အချစ်ကိုတော့ ဝေမစားနိုင်ဘူးလို့ တော်တော်များများ ခံယူထားကြသူတွေပါ။ ရှားရှားပါးပါး၊ မယားအမြောက်အများ၊ လင်အမြောက်အများ ယူပြီး အချင်းချင်း ကြည်ဖြူနေသူတွေလည်း လောကကြီးမှာ ရှိနေပါသေးတယ်။ အခုလည်း တရားဝင် မယားကြီးတစ်ယောက်ဟာ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့အချစ်ကို တစ်ခြားလင်ညီအစ်မ(၃)ယောက်နဲ့ မျှဝေနေရခြင်းအပေါ်မှာ သူမရဲ့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ Waraphon Pruksawan နာမည်ကတော့ ဖြစ်ပြီး၊ တရားဝင် မယားကြီးပါ။ မယား(၃)ယောက်နဲ့ ဘဝတုန်းက အဲဒီအမျိုးသားအနေနဲ့ ကျဉ်းထဲကြပ်ထဲ ရောက်နေတော့မှာပဲလို့ လူတွေက တွေးခဲ့ပေမယ့်၊ ယခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ နောက်ထပ်မယားတစ်ယောက် ရယူခဲ့ပြီး၊ လေးယောက်မြောက် မယားကို တော်ကောက် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Waraphon ကတော့ အခြားမယား(၃)ယောက်နဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အချစ်ကို မျှဝေနေရခြင်းအတွက် … Read more
ရှင့်အဖေကို ကျမအိမ်ပေါ်မှာ မထားနိုင်ဘူး ပြောတဲ့ မိန်းမကို ပြစ်ပြီး ဖခင်ကို ခေါ်ဆင်းကာ သွားတဲ့ သားလိမ္မာ
ရှင့်အဖေကို ကျမအိမ်ပေါ်မှာ မထားနိုင်ဘူး ပြောတဲ့ မိန်းမကို ပြစ်ပြီး ဖခင်ကို ခေါ်ဆင်းကာ သေတဲ့အထိပြုစုတဲ့ သားလိမ္မာ မိန်းမယုတ်ကို ထားခဲ့ပြီး ဆေးရုံမှာ ဖခင်သေတဲ့အထိ လုပ်ကျွေးပြုစုခဲ့တဲ့ သားလိမ္မာ က​မ္ဘောဒီးယားနိုင်​ငံက ဖြစ်​ရပ်​မှန်​​ကြေကွဲစရာမြင်​ကွင်း​လေးပါ …. လောကမှာ မိန်းမသေလို့ နောက်မိန်းမ တစ်ယောက်ထပ်ယူပြီး မိန်းမအစားထိုးလို့ သားသမီး အစားထိုးလို့ ရတာမှန်သော်ငြားလဲ မိဘသေလို့ မိဘအစားထိုး၍ မရနိုင်သည်ကတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့သောလူများသည် မိဘများအပေါ်မှာ ကျေးဇူးတရား မသိတက်ကြသော်ငြာလည်း က​မ္ဘောဒီးယားနိုင်​ငံက Iv Kimsean အမည်ရှိတဲ့ အသက် ၃၀ နှစ်ရှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ …. ဆေးရုံမှာ ဖခင်သေတဲ့အထိ အလုပ်အကျွေး ပြုစုခဲ့ပါတယ်။ Kimsean တို့ လင်မယားသည် လူကြီးချင်း သဘောတူလို့ ယူခဲ့ကြပါတယ်။ … Read more
သူဌေးလောင်းတို့အတွက် ထိုင်းထီ ချဲလ် ၃ လုံး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု မကြည့်အားသေးရင် ရှယ်ထားကြနော်
January 17, 2021 by Padaethar
လောကီပညာကို လိုကျစားကွသော မွနျမာဆရာမြား၌ တဈခါတဈရံ ဆရာဆရာအခငျြးခငျြး ပညာကို ဖလှယျသော အလအေ့ထ ရှိတတျကွ၏ ထိုသို့ တဈဦးအား ပေးအပျကာ လဲလှယျကွရာ၌ ရှေးဦးစှ မိမိရှာဖှတေတျ သိထားသမြှ ပညာရပျမြားတှငျ အကောငျးဆုံးနှငျ့ ကိုယျတှမှေ့နျကနျသော ပညာမြားကို သာပေးပါမညျ… မဟုတျမမှနျ လုပျကွံ၍ ပေးခဲ့မိလြှငျ ယခုတတျထားသမြှ ပညာမြားလညျး ပကျြကှကျ၍ မဟာအဝီစိငရဲ၌ မကြှတျတနျးခံရပါစေ ဟု ဆရာနှဈဦးစလုံး သစ်စာပွုပွီးမှကို ပညာဖလှယျကွ လရှေိ့ပါသညျ… ယခုဖျောပွလိုကျ သောနညျးမှာ ၁၂၉၄ခုနှဈလောကျက ပဲခူးမွို့သို့ရောကျစဉျ ယုံကွညျလောကျသော ပယောဂဆရာတဈဦးနှငျ့ စာရေးသူတို့ ပညာခငျြး ဖလှယျကွရာမှ ရရှိခဲ့သောနညျးတဈခု ဖွဈပါသညျ… ဥုံ ရှငျသီဝလိ ဘုနျးရှိမွတျစှာ ရဟန်တာထိပျမှာမွတျဖြား ကိုယျတျောထား နားမှာ ကိုယျတျောကြိနျး ခပျသိမျးလိုရာ… ရကာယဝစီ မနောခြီ … Read more
ဘေးအိမ်က အမျိုးသမီးနဲ့ ဖောင်းဒိုင်း… ဖောင်းဒိုင်းလုပ်ဖို့ အကြံဥာဏ်ကောင်းသော အမျိုးသားရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း
January 15, 2021 by Padaethar
ဘေးအိမ်က အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးနဲ့ ဖောင်းဒိုင်းဖို့ အိမ်အောက်မှာ လိုဏ်ဂူတူးထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသား Mexico နိုင်ငံ Villas del Prado မြို့ရဲ့ Tijuana ရပ်ကွက်မှာ Alberto အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အိမ်နီးနားချင်းရှိအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အချစ်ဇာတ်လမ်းရှိနေတဲ့အပြင် Alberto ဟာ သူ့ရဲ့အိမ်အောက်မှာလျှို့ဝှက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဖောက်ပြီး သူချစ်ရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Jorge တို့ရဲ့အိမ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Jorge ရဲ့ လုံခြုံရေးအလုပ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Alberto က သူမအား အခက်အခဲမရှိ လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်တည်ဆောက်ထားတာပါ။ တစ်နေ့ ခါတိုင်းအချိန်ထက် အိမ်ကိုစောပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့ Jorge ဟာ သူ့အား လှည့်စားနေတဲ့စုံတွဲရဲ့ဟန်ဆောင်မူကို ကိုယ်တိုင် ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။Jorge ဟာ သူတို့ရဲ့ကုတင်အောက်ကို စစ်ဆေးကြည့်ပေမဲ့ Alberto ကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ထို့နောက် အိပ်ရာနောက်ကွယ်မှာ ပုန်းနေခဲ့တဲ့ … Read more